1. Garantie Partielle de Portefeuille (GPP) - Solidis
Mangataka ho antsoina
SOLIDIS Orinasa ara-bola ho an'nyfisandratan'i Madagasikara
Notre mission @mg
Nos engagements @mg
Nos défis @mg
Conseil d’administration @mg
Direction Générale @mg
Comité d’engagements @mg
Comités d’Investissement @mg
Comité Responsabilité Sociétale d’Entreprise @mg
Comité de Pilotage du Fonds GPP @mg
Ireo fitaovana Fanombanana tetik’asa
Hoan’ny fahombiazan’ny GPL – mpiray ombon’antoka
Ho an’ny Findramam-bola momba ny tany sy trano
Ho an’ny Orinasa: Fitsapana ny fahazoana Antoka/Famatsiam-bola
Simulateur – Partenaire @mg
Nos publications @mg
Nos activités @mg
ANTOKA AMIN’NY BANKY
Capital investissement @mg
+261 20 222 11
1. Garantie Partielle de Portefeuille (GPP)
Inona no tolotra azonay hanampiana anao?
Natokana hoan’ireo banky sy orinasa mpampindram-bola izay miara-miombon’antoka amin’ny SOLIDIS ity tolotra ity, noho ny hananan’izy ireo traikefa manokana momba ny fandalinana ny fampindramam-bola. Manana alalana hisolo tena an’i SOLIDIS izy ireo, araka izany, amin’ny fanomezana antoka hoan’ireo orinasa madinika sy salantsalany manjifa ao aminy mba hampiroboroboan’izy ireo ny asany sy ny kitapom-bolan’izy ireo.
Inona avy ireo tombotsoa ho azonao?
– FIANTOHANA: Amin’ny maha-fitaovana ara-bola azy, SOLIDIS dia miantoka ny famerenana soa aman-tsara ny trosa nomena an’ireo orinasa madinika sy salantsalany amin’ny alalan’ny fanomezana antoka ara-bola.
– FIARAHA-MIZAKA NY SAMPONA: mety hitranga amin’ireo findramam-bola nangatahin’ireo orinasa mba hanamorana ny famatsiam-bola azy ireo sy handraisana anjaran feno amin’ny fampandrosoana ny tontolon’ny fandraharahana.
– MITOMBONA ARY AZO ANTOKA: Mba hanamorana ny fandinihina ny fangatahana iray, dia tokony ho tsara rafitra izany. SOLIDIS dia mandray anjara betsaka amin’ny fandinihana ny dosié eo amin’ny resaka fisafidianana,, fanombanana ary fanarahana rehefa handrafitra ny antotan-taratasim-pamatsiam-bola.
– MITSINJO LAVITRA: manatsara ny fifandraisana eo amin’ny Orinasa mpamatsy vola sy ny Orinasa amin’ny fisokafana amin’ny karazana mpanjifa vaovao.
Inona avy ireo dingana?
Firafitry ny ANTOKA :
–FOMBA FIASA: voafehin’ny fifanarahana nosoniavin’ny roa tonta ny fiaraha-miasan’ny SOLIDIS sy ireo orinasa mpiray ombon’antoka aminy.
–FIANTRAIKAN’NY FIANTOHANA : Ny antoka SOLIDIS dia antoka ara-bola izay mora ahodina kokoa na afindra, raha mitaha amin’ny antoka tena misy mahazatra. Natokana ho an’ireo orinasa mpiray ombon’antoka amin’ny SOLIDIS io karazana antoka io mba hanatsara kokoa ny famehezana ny risika mety hitranga sy hampiroboroboana ny hetsika ara-barotrin’ireo mpiray ombon’antoka aminy.
Orinasa madinika sy salantsalany (MPME)
Fanotaniana Matetika Mipetraka
Les chiffres Clés(MG)
A voir @mg
A lire @mg
Nous contacter @mg